Xildhibaanada Golaha Shacabka oo ansixiyay in Kuraasta Haweenka ku fadhiyaan loo gaar yeelo - Tilmaan Media
Xildhibaanada Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya ayaa maanta ansixiyay mooshin ay shalay gudbiyeen Xildhibaannada Haweenka, kaasoo ay ku dalbanayeen in kuraasta ay ku fadhiyaan loo gaar yeelo, oo aan lagu darin kuwa ragga.
Dood kulul ayaa shalay ka dhalatay qoondada Haweenka ee kuraasta Baarlamaanka, waxaana qaar ka mid Haweenka ay dalbadeen kuraastoda aan lagula tartamin.
134 Xildhibaan ayaa ansixiyay in Haweenka kuraastooda loo gaar yeelo oo aan lagu darin ragga, halka illaa 10 Xildhibaan ay diiday.
Qaar ka mid ah Xildhibaanada diiday ayaa ku eedeeyay Guddoonka Golaha in habka ay u mareen ansixintan aysan waafaqsaneyn xeer hoosaadka Baarlamaanka.
Guddigii wadajirka ee dhameystirka xeerarka doorashooyinka ayaa soo gudbiyay illaa afar xeer sida qoondada Haweenka, mataalada Gobolka Banaadir ee Aqalka Sare, arrinta Gobolada Waqooyi iyo deegaameynta Kuraasta, waxaana ka horyimid xeerkaas madasha Xisbiyada Qaran iyo odayaasha dhaqanka iyo dhalinyarada.
Soomaali iyo Trump siddeed arrimood oo dhexmaray